बच्चनलाई इशाले ‘भाइ’ नजरले हेरेपछि… - Mero LifeStyle Mero LifeStyle
यस्तो छ, आजको विदेशी मुद्राको विनिमय दर
विश्वका सबैभन्दा ज्येष्ठ व्यक्तिको निधन
अध्ययन भन्छ– १० करोड मानिसमा कोभिडपछि देखिए यस्ता लक्षण
कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाले १० प्रतिशत सेयर दिने
धनुष-ऐश्वर्या : अलग हुनुको रहस्य
मोटोपनका कारण र समाधानका उपाय
पैसा उठाइयो, एकीकृत बस्ती बनाइएन
आजको दिनमा विश्वमा घटेका चर्चित तीन घटना
चेल्सीको उपाधि यात्रामा को बन्यो तगारो?
आजदेखि मठमन्दिरमा नित्य पूजा मात्र
बच्चनलाई इशाले ‘भाइ’ नजरले हेरेपछि…
मेरो लाइफस्टाइल	|| 12 January, 2022
बलिउड अभिनेत्री हेमा मालिनीले फिल्म उद्योगमा निकै लामो समय राज गरिन् । उनको सुन्दरताकै कारण जोकोही उनलाई ‘ड्रिम गर्ल’ मान्दछन् । धर्मेन्द्रसँग विवाह गरेकी हेमाका दुई छोरीमध्ये इशा देवल कुनै समय बलिउडमा सक्रिय थिइन् ।
हेमा इशाले आफूले रोजेको केटासँग विवाह गरुन् भन्ने चाहन्थिन् । उनी अमिताभ बच्चनका छोरा अभिषेकलाई ज्वाइँ बनाउन चाहन्थिन् । हेमा र अमिताभले कैयौं फिल्ममा सहकार्य गरेका छन् । अमिताभ हेमाका राम्रो साथी पनि हुन् । त्यहीकारण हेमा आफ्नो साथीत्वलाई पारिवारिक सम्बन्धमा रूपान्तरण गर्न चाहिन्थइन् । हेमा अभिषेकलाई नजिकबाट चिन्थिन् । किनकि अभिषेक संस्कारी र सबैलाई सम्मान गर्ने स्वभावका थिए । जुन कुराबाट हेमा प्रभावित थिइन् ।
तर, हेमाले सोचे जस्तो भइदिएन । इशा अभिषेकसँग विवाह गर्ने मामिलामा सहमत थिइनन्, त्यहीकारण पनि उनले विवाहलाई अस्वीकार गरिन् । किनकि इशा अभिषेकलाई एक भाइको रूपमा हेर्थिन् । यहीकारण उनले अभिषेकसँग विवाहको कुरा अस्वीकार गरिन् ।
इशाले बाल्यकालका साथीसँग विवाह गरिन् । उनका पति व्यापारी हुन् । यता अभिषेकले पूर्व मिस वर्ल्ड तथा अभिनेत्री ऐश्वर्या रायसँग विवाह गरे ।
‘कठपुतली’ हेर्नेलाई आइफोन–१२ उपहार, यस्तो छ नियम
आयुषले छाडे सलमानको फिल्म
काठमाडौं । दक्षिण भारतीय अभिनेता धनुष र उनकी श्रीमती ऐश्वर्या रजनीकान्त वैवाहिक जीवनबाट अलग भइसकेका छन्। उनीहरूले गत सोमबार विज्ञप्ति
अरूलाई प्रेम सिकाउने ‘महाभारत’का श्रीकृष्णको पत्नीसँग डिभोर्स
भारतीय टेलिभिजनको ऐतिहासिक टेलिफिल्म ‘महाभारत’का अभिनेता नीतीश भारद्वाज पत्नी स्मितासँगको विवाहको १२ वर्षपछि औपचारिक रुपमा अलग्गिएका छन् । स्मिता पेशाले
अलग्गिए अभिनेता धनुष र ऐश्वर्या रजनीकान्त
साउथ सुपरस्टार एवं रजनीकान्तका ज्वाइँ धनुष र ऐश्वर्या रजनीकान्त साउथ फिल्म शक्तिशाली जोडीका रुपमा चिनिन्छन् । तर, अब यो जोडीले
‘पठान’मा स्टन्ट दिँदै दीपिका
बलिउड अभिनेत्री दीपिका पादुकोण स्टन्ट दिन रुचाउने कलाकारमा पर्छिन् । उनी आफ्नो स्टन्ट आफैं गर्न रुचाउँछिन् । एथलेट परिवारको पृष्ठभूमिबाट
बुस्टर डोजबारे भ्रम र यथार्थ !
कोभिड हावाको सम्पर्कमा आएपछि कमजोर
महिनावारीको बेला अत्यधिक पेट दुख्छ ? यस्तो गर्नुस्
ओमिक्रोनबाट बच्न आयुर्वेदिक जीवनशैली अपनाऔँ
संक्रमित बढे पनि अस्पताल भर्ना हुनेको संख्या न्यून
यस्ता कारणले देखिन्छ डरलाग्दो सपना